”DF Soomaaliya ayaa carqalad ku ah dhismaha maamulka Galmudug-ta cusub” waxa sidaa yiri… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta ”DF Soomaaliya ayaa carqalad ku ah dhismaha maamulka Galmudug-ta cusub” waxa sidaa...
”DF Soomaaliya ayaa carqalad ku ah dhismaha maamulka Galmudug-ta cusub” waxa sidaa yiri…
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug ee waqtigoodu sii dhammaanayo ayaa wuxuu Dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay iyadu carqalad ku tahay dhismaha Galmudug-ta cusub.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise oo la hadlay Laanta afka Soomaaliga ee BBC ayaa sheegay inay sharci-darro yihiin wadooyinka ay Dowladda Somaliya u mareyso dhismaha maamul cusub oo dadka deegaanka ay leeyihiin.
“Waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo wax kasta oo qoladaan dowladda ay wadaan inay tahay arrin sharci-darro ah, laga soo bilaabo waxay ugu yeereen inay dhiseen Guddiga Doorashooyinka iyo inay xareynayan odayaasha. Gebi ahaanba waa waxaan waafaqanayn Sharciga Jamhuuriyadda iyo kan Galmudug-ba u yaala.” Ayuu yiri Xildhibaan Cabdiraxmaan Cali Ciise.
Mar la weydiiyay waxa ay ku diidan yihiin Guddiga Farsamada ee Dhismaha Galmudug oo Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay soo magacawday ayuu yiri “Waxaa ka mid ah in markii hore lagu heshiiyay in Galmudug oo mid ah la dhiso, muxaafid iyo mucaaradba inay qayb ka noqdaan dhismaha Galmudug iyo in heshiiskii Dowladda Federaalka iyo Ahlu Sunna dhex maray la fuliyo, gebi ahaanba haddii ay Dowladda Federaalka baalmareyso, ay dooneyso inay shaqaalaheydii guddiyo ka dhigayso iyo dad ay odayaal ugu yeereen ay xareenayso, Xildhibaano ay ayada jeebkeeda ka soo xushay ay rabto inay shaaciyaan, maaha wax Galmudug u cunatamaya.”
Waxaa uu soo hadalqaaday heshiiskii ay billo ka hor wada gaareen Dowladda Federaalka iyo Ahlu Sunada Galmudug, kaasoo ku qotamay in la dhiso Galmudug loo wada dhan yahay, ha yeeshee ay hareermartay dowladda.
“Hoggaanka Galmudug iyo Dowladda Federaalka waxaa dhex maray heshiis, heshiiskaas oo gundhig u ah sidii Galmudug oo mida loo heli lahaa, heshiiskaasi waxaa gundhig u ah in wax la wada dhiso, kaasoo runtii qofna sadbursi ku samaysaneynin. Marka anigoo ku hadlaya afka Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Galmudug waxaan cadaynaya gebi ahaanba waxay meesha ka waddo dowladda inay yihiin wax sharci-darro ah.” Ayuu yiri Xildhibaanka.
Waxaa uu intaa ku daray “Guddiga ay keentay Dowladda Federaalka waa guddi ay dooneyso inay ku caburiso dadkii xoreeyay deegaankan, oo la dagaalamaayay Al Shabaab.”
Su’aal ahayd inay carqaladeynayan dhismaha Galmudug-ta cusub, maadaama ay eedeynayan Guddigii ay soo magacawday dowladda ayuu yiri “Cidda carqaladeynayso waa dowladda, daacad kama ahan in Galmudug oo mida la dhiso.”
Sidoo kale waxaa uu ka dhawaajiyay in dadka reer Galmudug iyo Ahlu Sunna Waljameeca wixii ay fillayeen mooyee ay wax kale la timid Dowladda Federaalka Somaliya, taasoo uu muujiyay inay wax lala yaabo ku noqotay.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Ciise oo u muuqday mid taageersan Ahlu Sunada Galmudug ayaa yiri “Cidda dooneysa in la helo Galmudug oo mida waa Ahlu Sunna, ee uu hormuudka ka yahay Madaxa Xukuumadda Galmudug.”
Xildhibaan Cabdiraxmaan Ciise oo wax laga weydiiyay waxa uu xalku yahay ayaa yiri “Waxaan xal u aragnaa inay dowladda heshiiskii fuliso, waxaan xal u aragnaa in dowladdu ay ogolaato Galmudug oo mida la dhiso, ka soo qaybgalaan cid kastoo Galmudug rabta inay samata bixiso. Waxaa xalka ku jiraa oo aan u aragnaa in deegaanada kala gedisan ee tabashooyinka kala duwan qaba in la dhageysto iyo in wax walboo la qaadaayo lagu waafajiyo heshiiskii lagu gaaray Magaalo Madaxda Dhuusamareeb oo qeexaayay habraaca doorashooyinka.”
Si kastaba ha’ahaatee, waxaa isa soo taraaya eedeymaha xoogan ee loo jeedinayo Dowladda Federaalka Somaliya, ee ku qotama inaanay dhiseynin maamul cusub oo dadka deegaanka metela, iyadoona uu ujeedkeedu ugu weyn yahay inay Galmudug ka hirgeliso maamul lamid ah kan hadda ka jira Koonfur Galbeed, oo afkaarteeda ku shaqeeya.
Dowladda ayaa carqalad ku ah dhismaha Galmudug
Xildhibaan eedeeyay Farmaajo